Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights Opinda Mudare neChina Achimirira Vechidiki Vana
Muzvare Joanna Mamombe nedzimwe nhengo dze bato ravo
Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri mubishi kuyedza kuburitsa muhusungwa vechidiki vana vari kupomerwa mhosva dzakasiyana siyana. Vechidiki vana ava vanoti; mumiriri weMDC Alliance mudunhu reHarare West mudare reparamende, Muzvare Joanna Mamombe; mutevedzeri wasachigaro mubazi revechidiki mubto iri, Muzvare Cecilia Chimbiri; mutungamiri weZinasu, VaTafadzwa Ngadziore pamwe neimwe nhengo yeMDC Alliance, VaMakomborero Haruzivishi.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaKumbirai Mafunda, vanoti Muzvare Mamombe naMuzvare Chimbiri vari kutarisirwa mudare nhasi apo mejastiriti achapa mutongo wekuti vatongwe vachibva kumba here kana kuti kwete. Vaviri ava vari kupomera mhosva yekutyora mitemo yeCovid-19 nekuita musangano nevatoi panze pedare ramejastiriti muHarare vachinyunyuta nekusungwa kwa VaHaruzivishe. Vachuchusi vehurumende vari kupikisa kuti vaviri ava vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachiti vanozogona kupara dzimwe mhosva.
Asi vaviri ava vakaendesa zvekare gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika, VaKazembe Kazembe, nevamwe kumatare nemifananidzo yavo yakaburitswa mumapepanhau mushure mekunge yatorwa nemapurisa aiferefeta nyaya yekuti vainge vapambwa pamwe naMuzvare Netsai Marova gore rapera. Vanoti vanoda mari inosvika mamiriyoni gumi nemashanu emunyika. Hatina kukwanisa kubata VaKazembe kuti tinzwe divi ravo.Ngatinzwei VaMafunda vachitsanangura.